Axmed Baasto ?Boolis ayaa ka hortegaya dilalka Aanada ku salaysan ee reer miyiga Galmudug? – Radio Daljir
Axmed Baasto ?Boolis ayaa ka hortegaya dilalka Aanada ku salaysan ee reer miyiga Galmudug?
Seteembar 15, 2013 2:35 b 0
Galkacayo, September 15, 2013 – Maamulka Galmudug ayaa shaaciyey in ay ka hortegayaan dilalka dhanka qabaa?ilka ah ee ka dhacaya deeganada maamulka, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee gobolka Mudug oo ah halka ay ka taliso Galmudug.
Wasiirka arrimaha gudaha io amniga Galmudug Axmed Baasto oo la hadlay warbaahinta maamulkaas, wuxuu sheegay in ay dar-dar gelin doonaan adkaynta amniga deeganaada iyo in laga hortago khatarta ka timaada dilalka beelaha.
? Ciidamo boolis ah ayaan geyn doonaa deeganada ay ka dhacaan dilalka qabaa?ilka ee gobolka, waa arin soo noq noqota oo nasiib daro ah? ayuu yiri Axmed Baasto.
Maamulada degmooyinka Galmudug iyo wasaarada arrimaha gudaha ee maamulkaas ayaa heshiis ku gaaray in laga wada-shaqeeyo amniga guud iyo in laga hortago khatar kasta, waxaa in badan la gorfeeyey aanooyin qabiil oo ka dhexeeya beelaha gobolka Mudug.
Dadka reer miyiga ah ee gobolka ayaa inta badan waxaa dhexmara dagaal beeleed, kaas oo ka dhasha daaqsin iyo ceelal kuwa biyaha ah, mararka qaar dilalka ayaa ah kuwa xasuuq ku jiro oo lagu laayo caruurta iyo dumarka sida dhowr jeer oo hore dhacday.
Madaxweyne Faroole iyo xubno ka tirsan dowladda Puntland oo gaaray magaalada Brussels ee Beljium
AMISOM oo 100 boolis ah geynaysa gobolka Hiiraan kuwaas oo ku biiraya howgalka nabad illaalinta